Waxyaalaha u baahan in fiira gaarah lasiiyo Hadii aydun rabi arinta ilma iska soosaarida in aad cidkale u shegtaan waxa haboon in la’isticmaalo kinka canka iyo ciridka hoostiisa lagashado. Hadii la’adegsado kan ibta la’iskagaliyo waxa dhicikarta in marka ay kula soodaristo xanuun kaadi marenta lagahelikaro. Iyada oo 3-4 kiniin lagu liqo 6 amaba 8 saacadood mar waa mid kaa badbaadiyo xanuunka caloosha.
Intee wakhti marka uu yahay ilmaha urka kujira ayaa dawaynta nocanii ah la’adegsani karaa? Sided ay mujinayaa daraasada lasameya dawaynta nocani ah waxa ladadegs ankaraa marka uu ilmagaleen kujiro ilmo 10 todoobad jira, waxana haboo in qiyaaasta saxda laqaato.
Maalinta ugu hiraysa ee aad isku aragtay caadada amaba kadib caadada waad:
bilaabikartaa qaadashada kiniinka laiskaga ilaaliyo uurka.
Wekhtiga aad ilmaha iskasaaraysidi cida aad aminaysid ee aad isleday wuku caawi karaa waa kuma? Qaar katirsan dalalka aduunka waxa jira nidamyo dhameed iyo arimo bulsho oo aad u adag. Marka lafulimaayo hawshan waxa dic karta in ay qofka la soodarsto xalad caafimaad daro aa ba’an. Waxana loobahanyahay in lahelo wanooyn iyu talooyin.
Kahor qadashada kiniinka arimaha loobahanyahay in loofiirsado
Haday ilmagalenka kujiraan waxyaalaha dhalmada la’iskaga ilaaliyo ee sida koyl
Hadaad naaska nuujinaysid waxa dhickarta in uu ilma naaska nuuga ay calooshy shubto sidaa si awgeed ilmaha naaska nuuj intaada qaadaniis kininka qadashada kinka dabadeed waa in aan naaska lanuujn 4 saco ka hor
Hadaad lanooshahay HIV ADisga taxadirsamesi ayna xalada caafimaadkaaga waxyelo u soogaadhin adiga oo qaadanaay dawada lidka ee HIV ilaali xalada cafimaad kaaga.
Dhiigu hadii u kuyar yahay ayranta islamarkan dhiigbadan kaayimaada marka aad adegsanaysid kiniinka dhalmada la’iskaga soorido, xaalada caafimaad kaagu khata ayay kusugantahay
Markasta oo aad kujirti xalada isticmaalka kininkan qaado biyo badan
Cunida raashin yar
Marka aad qaadanaysid kiniinka misoobrostool waa in aad heshid goob aad madaxbanaani uheshidsi aad nasash fiican u heshid oo dhabarka u jifsatid.
Marka aad qaadanaysid kiniinkan waa in aad heshiid qof ku xanaaneya oo shah iyo cuno diiran ku samaya
Marka uu dhiga ilmuhu kaasoo baxaayo waxa dhickarta in uu dhiigbadan kaaymaado, sidaas awgeed diyaarso maryo bada amaba moodes
Hadii uu xanuun dheraad ah kulasoodarso samayso qarsho aad ku aadiid xarumaha cafimaadka.